सजिलै घाँटी,काखी तथा तिघ्रामा भएको कालो दाग धब्बा हटाउने घरेलु उपाय – live 60media
मानिसहरु यस समस्याबाट छुट्कारा पाउन सौन्दर्य प्रशाधनको प्रयोग गरी धेरै पैसा खर्च गर्ने गर्दछन् । तर कहिलेंकाही छालासम्बन्धि समस्या हटाउन बनाइएका उत्पादनहरुको कुनै असर नभई पैसा खेर जान सक्छ । आज हामी तपाइँलाई छालामा हुने कालो धब्बाको समस्याबाट मुक्ति पाउने धेरै नै सजिलो उपायबारे जानकारी दिन्छौं ।
जसलाई अपनाई छालाको दाग वा कालो धब्बा हट्ने मात्र नभई तपाइँको छाला चम्किलो तथा स्वस्थ भई जवान पनि देख्न सक्नुहुन्छ । कालो धब्बा हटाउने विधिहरु निम्नानुसार छन् । :,,,भिडियो हेर्न तला क्लिक गर्नुहोला,,,
← किन हुन्छ पाइल्स ? थाहा पाउनुहोस् यसका लक्षण र उपचार
‘कसैले सहयोग गरे बाँच्थिन कि ! मेरा छोरीहरुले आमा भन्न पाउँछन कि पाउँदैनन् थाहा छैन’ →